Thwebula AIM 8.0.10.2 – Vessoft
Chat, Ewebhu, Ukukhulumisana Voice
AIM – a software for the text, izwi kanye video imiyalezo. Izici main of the software zihlanganisa ukuxhumana lengxoxo noma video inkomfa, ukwabelana amafayela kanye nokungenisa ezweni of the uhlu contact kusuka kwezinye izinhlelo zokusebenza. AIM kwenza ukuthumela noma readdress imiyalezo Movie bekwazi ukufaka ikhowudi izingxoxo. Isofthiwe iqukethe amathuluzi ukulungisa isimiso izaziso umsindo oxhumana ezahlukene. Isofthiwe ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Exchange of umbhalo, izwi kanye video imiyalezo
Thumela imilayezo Movie
Amazwana on AIM:
AIM Ahlobene software:
Ukukhulumisana Voice Isofthiwe ukwenza zokuxhumana ngezwi ne high quality umsindo ngesikhathi yokubambezeleka esincane. Isofthiwe kabanzi esetshenziswa abadlali futhi isekela kudalwa amaqembu thematic emidlalweni ehlukahlukene computer.
English, Русский, فارسی, Magyar... Auslogics Anti-Malware 1.9
Avira AntiVir 15.0.15.129 Free, Pro futhi Internet